Sunday, July 1, 2012 Sunday, July 1, 2012 Michael Reynolds kwuru
Aga m ekweta… na nso nso a mara ọkwa nke gbasaa n’etiti Twitter na LinkedIn mere ka obi tọọ m ụtọ. Agakwaghị ndị mmadụ ga-enwe ike iji akọ na uche tie mmelite Twitter ha n'ime LinkedIn na-enweghị ịbanye na itinye aka na ya.
Ọ bụ ezie na amaara m na ndị ọzọ na-ekerịta ọ myụ m, kedụ uru na ọghọm nke ijikọ akaụntụ Twitter gị na netwọkụ ndị ọzọ? Ebe ọ bụ na Facebook ka na-ekwe omume a, ọ ka na-eme. Mgbe ọ na-akwọ m akụ, m ga-ekweta na enwere ụfọdụ uru if eji nwayọ - mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Ya mere, gịnị bụ uru?
Ọ bụ oru oma. Enweghị ịgọnarị na anyị niile na-akarị ọrụ ma nwee obere oge ijide ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta. Site na izipu akpaaka site na onye ọzọ, ị na - echekwa oge. Mara mma ma kpoo.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-ere ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ na-agbasawanye iru gị. Otú ọ dị…
Otu n'ime ọghọm nke ijikọ akụkọ ndị a ọnụ bụ "weird syntax". Mkparịta ụka Twitter gụnyere akara ndị akọwapụtara na netwọkụ a, dị ka akara ngosi "@" na hashtags (lee: gịnị bụ hashtag.). Ọ bụrụ na ndị ọrụ Facebook hụrụ mkpụrụedemede ndị a na ntanetị akụkọ ha, ị nwere ike ịnwe ike ịhapụ ha n'ihi na post gị yiri ihe mgbagwoju anya na adịghị mma. Nke a na-ebelata aka.
Ọzọkwa, iji usoro mgbasa ozi dị irè na-agụnyekarị ege, ma ọ bụrụ na ị na-ejikọ mmelite na-enweghị ihe kpatara ịbanye na ịgwa onye ọ bụla okwu. Na-araparawo ọnọdụ mgbasa ozi.
Ọ dị njọ mgbe ị na-aga na ntụziaka ọzọ, kwa. M na-ahụ ndị mmadụ na-agbanye mmelite Facebook ha na Twitter, yana nke na-ebute mmelite emelitere (dịka a) ma ọ bụ ọbụna njọ, njikọ ụmụ mgbei na-enweghị nkọwa (dị ka a).
N'ikpeazụ - ọ bụ manụ doro anya, nri? Ọ bụ na ike agwụghị anyị nke ịhụ mmelite ọnọdụ umengwụ juputara na akara ngosi ndị na-apụtaghị ebe obibi na tọọji tweets?
Mee profaịlụ gị n'efu
M ga-akwado iji ohere a mee ihe iji kpochapụ akaụntụ Facebook na Twitter gị wee bido n'ezie na-ekere òkè na netwọk ọ bụla n'ebumnuche. Ekwuru m amụma na ị ga-ahụ ọkwa dị elu nke itinye aka na ị ga-eji ha dịka e siri chọọ ha: dị ka -elekọta mmadụ netwọk.
Tags: FacebookLinkedInelekọta mmadụ mediaTwitter
Jul 1, 2012 na 12:10 PM
Afraidjọ na-atụ m na enweghị ụzọ m ga-esi kwụpụ ha. Anyị na-agbanye ọtụtụ ọdịnaya na ebumnuche abụghị mgbe niile ịkwalite mkparịta ụka - ọtụtụ oge ọ bụ naanị iji nye ndị na-ege anyị ntị ozi. N’echiche, ọ bụ atụmatụ na-aga nke ọma. Ọ bụ ezie na m ga-enwe mmasị inyefe ozi ọ bụla ma nọrọ na mgbasa ozi ọha na eze ụbọchị niile… Adịghị m enweta ohere ahụ.
Jul 1, 2012 na 8:06 PM
Echere m na ị ga-ekwu nke ahụ, Doug 🙂 Anyị niile na-eji netwọkụ mmekọrịta dị iche iche ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịgbasa mgbe ahụ mgbagha gị nwere ezi uche. M n'ezie nwere mmasá »‹ (doro anya na) ma nke ahá »doesn't gh? Egosi na e nwere a definitive“ nri ”ma á» bá »“ “na-ezighi ezi”
Joseph Darragh kwuru
Jul 1, 2012 na 8:03 PM
Echere m na ịkwụpụ ha bụ nnukwu echiche. Ekwesịrị m ikweta na m na-ejikọ ha mana emesiri chọpụta ma ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnaya ọhụrụ na ikpo okwu ọ bụla dị ka akụkụ nke azụmaahịa n'ịntanetị mgbe ahụ ndị mmadụ enweghị ihe mere ha ga-eji soro akaụntụ ọ bụla.
Jul 2, 2012 na 10: 12 AM
Mgbasa mgbasa ozi na-akpaghị aka na-azọpụta oge, mana ọ nwere ike wepụta mmekọrịta ahụ ma ọ bụrụ na ị kpachaghị anya. Ọ nwere ike ịdị mfe ibipụta otu ozi ahụ n'ofe netwọkụ site na iji ngwaọrụ mgbasa ozi mmekọrịta mana ị kwesịrị icheta ịlele akaụntụ ọ bụla ma zaghachi mgbe enwere ajụjụ. Nweghị ike “ịtọ ya wee chefuo ya”.
Amy Fowler kwuru
Jul 3, 2012 na 7: 18 AM
Ekwenyere m kpamkpam. Ọ na-echekwa oge na obere oge, mana ọ nwere mmetụta na-adịghị mma na ogologo oge. Ọbụghị naanị na ọ dị ka ọgbaghara, mana ọ na-emegide ntọala dum nke ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ.